"Yaroslavl" udi umu ehi: àgwà, ọdịdị, iwu ozuzu na foto - Ugbo - 2019
Burenka Yaroslavl izu nke uwe uwe ojii ha mara. Ha mmiri ara ehi nwere nnukwu abụba, nnukwu kalori.
N'ime mmepụta mmepụta ihe, a na-eji mmiri ara ehi nke ụmụ ehi Yaroslavl emepụta ngwaahịa dị elu: obi cheese, utoojoo ude, cheese ...
"Yaroslavl" ụdị ehi: àgwà na foto
Yaroslavl ìgwè nke ehi na-eweta XIX narị afọ. N'ihi na e wuru nnukwu ebe, a na-achọwanye ihe maka mmiri ara ehi. Ná mmalite nke ịzụlite, ehi ndị ahụ na-adịghị ike ma na-emebi emebi. Ụdị ha mere ihe na-ezighi ezi iji jikọta ụdị ehi ndị ọzọ.
Dị ka mkpụrụ ndụ ha si dị, ndị dị otú ahụ na-eto eto na-enweta ahụ ike na pasent pasent nke abụba abụba na ngwaahịa mmiri ara ehi. Ya mere, e kpebiri igosipụta echiche naanị na nhọrọ ndị agbụrụ.
Ndị na-elekọta ihe na-ahọrọ ndị kasị mma site na anụ ụlọ. N'ihi ọrụ nhọrọ, usoro ziri ezi nke ọma, ndị ehi ahụ agbanwewo n'ụzọ dị ukwuu.
Ụdị ha nwere ọdịdị dị mma, ọkpụkpụ na-ewusi ike, na mkpụrụ na-eto eto ọtụtụ ugboro. E mere ngwa maka okike nke ụdị a n'afọ 1933.
Eke Yaroslavl Burenka bụ nwa. Isi, afọ, ebe ụkwụ dị n'akụkụ ụkwụ ụkwụ, ụda ọdụ, agba aja aja ma ọ bụ ọcha.
Cows nwere nkpuchi gbara ọkpụrụkpụ gburugburu anya ha. N'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị, a pụrụ ịchọta onye ọ bụla. Ọbụna obere oge - aja aja ma ọ bụ aja aja-motley.
Ọ bụ cows adịghị adị, ụgbụgbọ ahụ dị akwa. Igbe 65-75 cm Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ ndị mmadụ nwere tubercle nke ukwuu.
Limbs dị nkenke na nkwonkwo anya. A naghị emepụta ahịrị. Isi bụ elongated, nwere elongated udi. Na ya bụ mpi nke ìhè ndo. Atụmatụ nke obere mpi bụ ọchịchịrị.
Na-enwe ntakịrị ihe ike, nwa. Eke elongated, na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akpụkpọ anụ. Akpụkpọ ahụ na-agbanwe, na-agbanwe, nke dị nro na anụ ahụ na-adịghị mma. Uto nke ehi nke ụdị a bụ nkezi. Ogologo na-akpọnwụ nwere ike ịdị iche n'ime 120-130 cm.
Cows nke ìgwè a mee ezigbo ọrụ na arụmọrụ nwa. Napụta ma na-enweghị nsogbu. The uka nke amụrụ ọhụrụ ụmụ ehi 25-35 n'arọ. Mgbe ọ dị afọ 1.5 na afọ 345-385 kg.
Ntughari ubochi di iche n'ime 700-800 gr. Achịcha nwere ike ịdị elu ruo 810 n'arọ. Ebu arọ kachasị dị arọ bụ 1150 n'arọ. Cows dị arọ 450-510 kg. A na-emepụta udiri ha n'ụzọ dị ịrịba ama: ọ bụ nnukwu, na ọtụtụ mmiri ara ehi. Ná nkezi, ịdị arọ nke mmiri ara ehi kwa afọ bụ 2400-3600 n'arọ, abụba ọdịnaya - 4.2%.
Na ugbo ndi ozo na ulo oru ohuru a ma ama ibu nke mmiri ara ehi nwere ike iru 5000 kg, abụba ọdịnaya nke 4.3%. Ndị na-azụ anụ ụlọ na-emepụta ruo lita 12,000.
Ọtụtụ cows na-emepụta mmiri ara ehi abụba ọdịnaya nke 4%. Ọ bụrụ na mkpụrụ nke mmiri ara ehi karịa akara nke 6000 lita, ọdịnaya abụba ahụ ruru 6%.
E nwere ụdị ehi ndị ọzọ mmiri ara ehi, dịka: Jersey, Simmental, Aishir, Red Steppe.
Foto "Yaroslavl" oke ehi:
Ọ dị mkpa! Site na mmụba nke mmiri ara ehi, abụba nke mmiri ara ehi nwere ike ịbawanye 2%.
Ụdị ehi a nwere mmiri ara ehi dị elu nke na ọ bụ ihe na-abaghị uru iji tụgharịa ha maka igbu. Ụdị ụdị ehi ehi a dị oke ala. Nkịtị arọ na ala nwere obere ọnụego.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-azụ anụ na-arụ ọrụ na abụba nke ụdị a. Ịzụ ụmụ ehi na ọnọdụ nke ha na-emetụta oke mmiri ara ehi.. Cows na-eme n'ụzọ dị ịrịba ama na ụdị nri dị iche iche na mmụba bara ụba nke nri. Nke a nwere mmetụta dị mma maka mkpụrụ nke ehi na àgwà anụ.
A na-agafe ụdị ehi a na ngalaba Holstein. N'ihi ya, ndị na-azụ atụrụ apụwo ụdị mmadụ ọhụrụ - Mikhailovsky. Udozi umu umu umu di iche iche 6500 lita.
Osisi Yaroslavl nwere ike ibi na barn na nzuzo. Ụdị ihe a dị mma maka ụdị ọdịnaya ọ bụla.
Na nri nwere ike ịgụnye nri nri. A gaghị achọ nri pụrụ iche. Ma ehi kwesịrị inye ahịhịa ọhụrụ, hay. Nri ga-eri nri anụ, vitamin A, B, D, E.
Ụdị a na-eguzogide ọgwụ ọjọọ. Ọ dịghị ọrịa ọrịa leptospirosis, ọrịa na-ebu ajọ njọ, na-ahụ necrobacteriosis.
A na-eji ehi ndị a kpọrọ ihe nri mara mma. A na-egbochi ehi dị mma site na njirimara dị iche iche.
Kwado ihe ọ bụla. Buru ụmụ ehi ise n'ime afọ ọmụmụ.
Ha anaghị eri ọtụtụ nri. Ị nwere ike ịzụta ụmụ ehi n'ókèala dum nke Russian Federation.
Anụ ehi na mpaghara Yaroslavl, Vologda, Pskov, Nizhny Novgorod, Vladimir, Ivanovo, Kostroma. Lelee ehi Yaroslavl - otu n'ime ndị nnọchiteanya kacha mma nke mmiri ara ehi.
Mmiri ara ehi nke ehi ndị a dị mma maka ịme cheeses, ude mmiri ude, obere cheese. Iji mee ka anụ ahụ dị ọcha na-enye ezigbo mmiri ara ehi, ọ dị mkpa ka ị ghara ịgafe ya na ụdị ndị ọzọ.
Mmiri ara ehi nke Yaroslavl nke ehi nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu nke abụba. Nne ehi a nke zuru oke na-anagide mmepụta nke mkpụrụ. A na-ekesa ụdị ndị a n'ókèala dum nke Russian Federation..
Akpụrụ akpụ nke ọkụkọ si Israel: nkọwa, ọdịnaya
Nkọwa nke uru na ọghọm, ihe niile e ji mara Black tomato ube
Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ uzommeputa maka salted cucumbers n'ụlọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Burenki "Yaroslavl" ọmụmụ - otu n'ime ndị nnọchianya kasị mma nke ntụziaka nke mmiri ara ehi